Art is My Life: အစိမ်းသေ...
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 11:31 PM
I haven't read long time for soe gyi' blog. Now, already this post and appreciate you it. Cheers !
ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာဗျာ... စာအရေးအသားကလည်း သွက်သွက်၊ထူထူဘဲ...
naymin thuyain said...
သုံးခါ ပြည့်အောင်တော့ ကံ မ
မဲ့ ကိစ္စ မရှိပါဘူး။ကျွန်တော့ ဘဝက
ဘယ်အရာကမှ ကျွန်တော့ကို ပျော်ရွင်
တာ တခုတော့ ရှိပါတယ်။မြန်မာဘောလုံး
အသင်းလေ။သူတို့ နိုင်ပြီး ဖလားရရင်တော့
မျက်ရည်များတောင်ကျခဲ့ရပါတယ်။ယူ ၁၇ ထင်တာ
ပါဘဲ။ဦးခင်ညွန့်ကြီးတောင် ကွင်းထဲဆင်းပြီး ဂုဏ်ပြု
အခုတော့ဗျာ အခုတော့ ဖလား မရတာကြာပေါ့။
မပျော်ပိုက်နိုင်တာကြာပေါ့။ ကဲ ဦးကျော်သူရေ
စာရင်းလေး ကြိုရေးထားရင် ပြောပါအုံးဗျာ။ဘယ်နေ့
ကျွန်တော့်အလှည့်ပါလဲဗျာ။ ကျွန်တော့ အလှည့်ကျရင်
ကျွန်တော့ရဲ့ အခေါင်းမှာ စာလေးတဆောင် ကပ်ပေးပါ
ဗျာ။ ဒီလူဟာ ဘောလုံးဝါသနာအိုးမဟုတ်ပါ သို့သော်
မြန်မာ ဘောလုံး အသင်း ဖလားရသော အခါမှသာလျင်